Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Dhallinyaro Hadda La Dagaalanta Xiisadda Cimilada ee Milan
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Italy War Deg Deg Ah • Shirarka • News • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Barta Facebook ee Federica Gasbarro oo ay ku sawiran tahay Greta Thunberg. Waxay ahayd Sebtember 2019 - labaduba waxay u joogeen New York shirkii ugu horreeyay ee dhalinyarada Qaramada Midoobay ee cimilada.
Federica Gasbarro, 26, iyo Daniele Guadagnolo, 28, ayaa noqon doona labada wakiil ee Talyaani ee kulanka Youth4Climate: “Wadista hamiga,” shir madaxeedka xiga ee caalamiga ah ee dhalinyarada si loola dagaallamo isbedelka cimilada.
Kulanka ayaa furmaya kaas oo Talyaanigu u noqon doono diiradda doodda iyo hindisaha difaaca deegaanka.
Qiyaastii 400 oo da'doodu ka yar tahay 30 sano-2 mid kasta oo ka mid ah 197 dal ee xubnaha ka ah Heshiiska Qaramada Midoobay ee Isbeddelka Cimilada (UNFCCC)-waxay ku kulmi doonaan Milan, Xarunta Koongareeska MiCo, laga bilaabo Sebtember 28-30, 2021.
Gabdhaha iyo wiilasha horeba ugu jiray xirfadda ama baranayay waddooyinka deegaanka ayaa ka qaybqaadan doona.
“Waxaa la joogaa waqtigii,” ayuu yiri Wasiirka Kala -guurka Deegaanka, Roberto Cingolani, “kaas oo dhallinyarada ka soo horjeeda ay si toos ah ugu soo jeedinayaan soo jeedinta. Xiisadda cimiladu waxay ku lug leedahay xoojinta wada -hadallada qarniyada soo socda. Milan gudaheeda, waxay noqon doontaa waqtiga aan isku dayi doonno inaan ka dhigno mid la taaban karo. ”
Doodda waxaa loo qaybin doonaa 4 aag, iyada oo ujeedadu tahay soo-jeedinta la taaban karo: hamiga cimilada, soo kabashada waarta, ka-qaybgalka jilayaasha aan dawliga ahayn, iyo bulsho aad uga war-qabta caqabadaha cimilada. Federica Gasbarro ayaa tiri, "Waxaan leenahay filashooyin aad u sarreeya, soo jeedinteennu waxay ka soo baxdaa su'aalo -waydiin dhex -marta dhallinyarada Talyaaniga ee u heellan bay'ada. Magaalada Milan, waxaan la wadaagi doonnaa kuwa ka mid ah wufuudda dalalka kale si ay u yimaadaan dokumenti guud. ”
Kuwa hadli doona waxaa ka mid noqon doona labada hoggaamiye ee “Jimcaha Mustaqbalka” - Greta Thunberg iyo Vanessa Nakate. Saaka uun, dhaqdhaqaaqii Talyaaniga ayaa dib ugu soo noqday socodkii dhowr magaalo, isagoo ku dhawaaqay shaqo joojin weyn Jimcaha, Oktoobar 2, iyada oo Greta lafteeda oo ku sugan barxadda Milan ay ka cabanayso ku lug lahaansho la’aanta dawladda.
Ku soo noqoshada ballanta Youth4Climate, dokumentiga ugu dambeeya waxaa loo soo bandhigi doonaa hoggaamiyeyaasha imanaya Milan, mar kale MiCo, shir-weynaha Pre-COP26. Tan dambe waxaa la qaban doonaa laga bilaabo Sebtember 30 - Oktoobar 2 waxaana bilaabi doona Wasiir Cingolani iyadoo uu goob joog ka yahay Madaxa Dawladda, Sergio Mattarella; Ra'iisul Wasaare Mario Draghi; iyo Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson.
Dhacdada Pre-COP26, oo la mid ah Youth4Climate, waxay dhacdaa marka la eego COP26, Shirka Qaramada Midoobay ee Isbedelka Cimilada ee Glasgow laga bilaabo Oktoobar 31-Noofambar 12 iyadoo lala kaashanayo Talyaaniga. Muddo 3 sano ah, QM waxay isu keentey ku dhawaad ​​dhammaan waddammada shirka cimilada adduunka intii lagu guda jiray munaasabadahaas tallaabooyin muhiim ah ayaa la qaaday sida saxeexa heshiiskii Kyoto ee 1997, iyo heshiiskii Paris ee 2015. Sannadkan, COP26, oo waddamadu ay tahay inay soo bandhigaan qorshayaal la cusboonaysiiyay si loo yareeyo wasakhda, daqiiqad aad u xasaasi ah - xagaaga ka dib oo daadadka iyo dabku muujiyeen deg -degga ah in loo gudbo sidii hore oo kale si wax loo qabto. In ka badan 190 hoggaamiye oo adduunka ah ayaa laga filayaa Scotland, oo ay ku biireen tobanaan kun oo wada -xaajood, wakiilo dawladda ah, ganacsato, iyo muwaadiniin 12 maalmood oo wada -xaajood ah.
COP kasta oo ku saabsan isbeddelka cimilada waxaa ka horreeya kulan diyaarin ah oo la qabtay bil ka hor, si sax ah Pre-COP, kaas oo isu keenaya wasiirrada cimilada iyo tamarta ee koox la soo xulay oo dalal ah si ay uga wada hadlaan qaar ka mid ah dhinacyada siyaasadda ee aasaasiga ah ee wada xaajoodyada iyo qotodheer arrimaha muhiimka ah taas oo markaa lagaga hadli doono Shirka. Qiyaastii 40-50 waddan ayaa ka qaybqaadan doona Pre-COP-ka Milan oo ay la yeelan doonaan wakiilo ka socda UNFCCC iyo bulshada rayidka ah.
Dhanka kale, All4Climate ayaa sii socota, barnaamij ay bilowday Wasaaradda Kala -guurka Ecological iyo Connect4climate ee Bangiga Adduunka, iyadoo ay ka qayb -qaadanayaan Gobolka Lombardy iyo Dawladda Hoose ee Milan. In ka badan 500 dhacdooyin ayaa laga qorsheeyey Talyaaniga oo dhan, oo ay abaabuleen sanadka gudihiisa shirkado, ururo, hay'ado dowladeed, iyo shaqsiyaad gaar ah si kor loogu qaado wacyiga cimilada. Waxaa ka mid ah hindisayaashii Milan, 30 -kii Sebtember ee San Siro Hippodrome, bandhigga Music4Climate, oo lagu soo saaray PianoB, ayaa la soo bandhigi doonaa oo waliba toos looga heli karaa livemusic.tv.
Halista Caafimaad Ka Weyn Ka Soo Baxaysa COVID-19?
8 qof ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacday magaalada Houston ee dalka Mareykanka
60% dadka Maraykanku uma badna inay safraan fasaxyada